हाँस्यव्यङ्ग्य निबन्ध संग्रह ‘जय फेसबुक’ विमोचित
Mon, Apr 23, 2018 | 21:22:27 NST
काठमाडौं, पुस १६ – निबन्धकार कविन्द्र तिमल्सिनाको हाँस्यव्यङ्ग्य निबन्ध संग्रह ‘जय फेसबुक’ राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेद्वारा विमोचन गरिएको छ ।
शनिबार राष्ट्रकवि निवास लैनचौरमा विशेष कार्यक्रम गरी पुस्तक विमोचन गरिएको हो । निबन्धकार तिमल्सिनको जय फेसबुकमा १६ वटा निबन्ध संग्रहित छन् । युवापुस्ताको फेसबुक मोह र त्यसले निम्त्याएका विभिन्न परिस्थितिमाथि निबन्ध केन्द्रित छन् । कम उमेरमै साहित्यलाई माया गरेर कलम चलाउनु राम्रो कुरा भएको भन्दै राष्ट्रकवि घिमिरेले निबन्धकार तिमल्सिनाको प्रशंसा गर्नुभयो ।
२० वर्षकै उमेरमा हाँस्यव्यङ्ग्य निबन्ध साहित्यमा कलम चलाउनु खुसीको कुरा भएको भन्दै प्राध्यापक डा. कृष्णप्रसाद दाहाले निबन्धकारलाई बधाई दिनुभयो । ‘जय फेसबुभित्रका निबन्धले व्यावहारिक जीवनमा मानिसले प्रविधिप्रति के कस्तो सम्मान प्रदर्शन गर्दै त्यसलाई आत्मसातसमेत गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको सटिक किसिमबाट बान्कीमय घुम्टो उघारेको छ’ डा. दाहालले भन्नुभयो ।
धादिङ फुलखर्कमा जन्मिएका तिमल्सिनाको ‘जय फेसबुक’ पहिलो निबन्ध संग्रह हो । साहित्यमा पाएको प्रेरणा र पाठकले गर्ने मायाले आफूलाई अझै हौसला मिल्ने र साहित्यिक यात्रामा थप सशक्त भएर लागिरहने निबन्धकार तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।